CoffeeSender: Ziga Kaadị Onyinye Starbucks na Otu Pịa | Martech Zone
E wezụga ọnya afọ m, onye na-ahụghị Starbucks n'anya? Anyị edeela tupu oge ahụ ọ bụ obere ihe ị na-eme nwere mmetụta dị ukwuu. Ebe ọ bụ na ị gaghị atụgharị n’ọtụtụ obodo n’agaghị ahụ a Starbucks, na Starbucks bụ otu ihe na nzukọ azụmahịa, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ị kwesịrị ịnwe ngwa jikọtara na CRM gị ebe ị nwere ike ịpụ Kaadị eGift $ 5 Starbucks® site na email.
CofeeSender bụ ngwa na-enye gị ohere izipu kọfị Starbucks na ndị ahịa, atụmanya ma ọ bụ ndị mmekọ naanị n'ime Salesforce na nyiwe ndị ọzọ. Nke a abụghị naanị bọtịnụ, agbanyeghị! CoffeeSender-enye gị ohere bulite a CSV, na-akpaghị aka na-agụnye na-eziga a onyinye kaadị site na mkpọsa, ma ọ bụ dị nnọọ iji aka na-ezipụ mgbe ị ma ọ bụ gị otu na-ele ya.
I nwekwara ike hazie template email nke na-enye Starbucks Onyinye Kaadị:
Na, n'ezie, koodu mgbapụta bụ nke kachasị kachasị mma!
CoffeeSender abụghị naanị etinyere na Salesforce, ha enwekwara njikọta na Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle Sales Cloud, Marketo, Hubspot, Influitive, Act-On, Pardot, Goto Nzuko, Google Calender, Outlook, SurveyMonkey, LinkedIn, Gmail, Slack, Taleo na Zendesk. Ahụghị njikọ gị? Ha nwere ezumike API iji tinye ya na ntanetị gị.
Tags: Na-aga n'ihuAPICoffeesenderGmailKalịnda GoogleNzukọ GotookpokoroNa-emetụtaLinkedInahịaIhe omimi MicrosoftOracle Ahịa Cloudele ihe anyamgbagharandị ahịaslackstarbucksStarbucks kaadị onyinyeSurveyMonkeyTaleoOnyebuchi